Wasakhda Paris waxay waxyeelo u leedahay sida qiiqa tubaakada | Cusbooneysiinta Cagaaran
13-kii Diseembar, 2013, waddooyinka Paris waxay ku wasakhoobeen sida qol 20-mitir murabac ah oo ay ku jiraan sideed qof oo sigaar caba. Caasimaddu waxay maraysay dhacdo ka mid ah wasakheynta aad u cufan, sababtoo ah taraafikada waddooyinka, kuleylka iyo howlaha warshadaha. Lixdii fiidnimo, cirku wuxuu soo bandhigay 18 milyan jajab ganaax halkii litir oo hawo ah, 30 jeer ka badan inta caadiga ah. Jawiga qof reer Paris ah wuxuu la mid ahaa kan sigaar cabista dadban.
Xogtan aan la daabicin waxaa si rasmi ah loo shaaciyey Isniinta, Nofeembar 24, waxaana lagu helay mahadsanid kubbadda Paris, oo lagu dhejiyay jardiinada André Citroen, Degmada 15, waxay awood u leedahay inay si joogto ah u cabirto nanoparticles jooga hawada. Kuwani jajab ultrafine, dhexroorkiisu ka yar yahay 0,1 micron, ayaa si aad ah waxyeello ugu leh caafimaadka aadanaha, maxaa yeelay waxay si qoto dheer ugu dhex dhacaan sambabaha, galaan qulqulka sanguine waxayna gaari karaan weelasha wadnaha.
Fina o ultrafine, Qaybahaas waxaa loo qoondeeyay tan iyo 2012 Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO), sida kansarka (sambabada, kaadi haysta). Kuwaani waxay sababi karaan cudurada wadnaha iyo neefta. Waxay sidoo kale saameyn ku leeyihiin dhalashada waxayna haweenka uurka leh geliyaan khatar sare oo ah inay dhalaan carruur miisaankoodu hooseeyo. Ku NOLOL waxay qiyaaseysaa in ka badan 2 milyan oo qof adduunka oo dhan ay sanad walba ugu dhintaan neefsashada jajab ganaax hawada, sababtuna tahay wasakheynta jawiga adduunka oo dhan
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Deegaanka » Qabso co2 » Wasakhda Paris waxay waxyeelo u leedahay sida qiiqa tubaakada
Nidaam cusub oo kacaan ah oo loogu talagalay qaboojinta dhismooyinka iyada oo aan lahayn qaboojiye